Amabhuzu ezingane ebusika omfana: amamodeli athandwayo, ukubuyekezwa mayelana nabakhiqizi
Ukukhetha izicathulo zomntanakho kunesibopho esikhulu. Umlenze omncane usanda kubalwa, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ungalimazi. Izifo ezihlukahlukene kangaka zezifo ziqala ngokuqondile efonini engavamile futhi engavamile. Lokhu kuyizinyawo eziphansi, nokukhula kwezipikili, ukugoba kwezinyawo, izinkinga zomgogodla nokuhamba, izifo zesistimu yonke ye-musculoskelet. Konke lokhu kwenzeka, akunjalo, hhayi njalo, kodwa ingozi ikhuphuka ngokuqondile ngenxa yezicathulo. Ngaphezu kwalokho, ukhethe amabhuthusi asebusika ngokungakhethi ngoba umfana eheha amakhaza, i-hypothermia nezinye izimpawu ezingathandeki, isimo sezulu esibanda.
Izinhlobo zezicathulo zezingane zasebusika
Izinhlobo ezihlukahlukene zezicathulo ngezinye izikhathi ziyashaka. Awusoze wazi ukuthi imfudumalo noma izinga eliphakeme kangakanani lokhu noma leyo modeli kuzoba khona. Ezinganeni, izicathulo zithengwa, zikhuluma kahle, isikhathi esisodwa, kusukela umlenze wengane ukhula ngokushesha. Kuyinto amahlazo uma amabhoti asebusika asebusika ngoba umfana engashiyi iwabo futhi awele eceleni emigodini emva kokuqhuma kokuqala kulinganiswa ukujula. Futhi ukuphepha kokushisa iphuzu elibalulekile. Ukugula wonke amaholide omnyaka omusha akuyona into enhle kunazo zonke yengane ekhuthele futhi ejabule.
Ngakho, kusukela ezicathulweni zasebusika emashalofini esivame ukubona ama-dummies. Okukhethwa kukho kuyashisa kakhulu, kepha ubusika bethu ngezimvula eziningi kanye namanzi amancane akufanelekile. I-sole yabo iyashesha ngokwanele, futhi izinto ezibonakalayo zidlula amanzi. Umphumela uba izinyawo ezimanzi. Enye inketho efudumele yizikhumba. Kodwa izigqoko ziyadingeka kubo. Kodwa futhi, ekugodini ekuhambeni okuhambayo kweqhwa, futhi ngaphandle kwabo uboya buyobe bumanzi. Futhi ama-dandies amancane awawazisi ngaso sonke isikhathi izicathulo ezinjalo.
Izinsana zebusika zezingane zabafana abanomshini wokwenziwa kwamanzi okuzenzekelayo kanye nezinsana ezinamathele eziyinkimbinkimbi kuyindlela ewusizo kakhulu. Qaphela ukuhlobisa kwangaphakathi. Kumele kube yimvelo.
Futhi indlela engcono kakhulu - amabhuzu asebusika omfana ovela esikhumba sangempela. Lokho futhi welula isikhathi eside kunazo zonke, nesifudumele, namanzi ngeke kudluliselwe. Kodwa izindleko zabo ziyoba ngaphezulu.
Indlela yokuhlola ikhwalithi yendaba
Okubaluleke kakhulu okukhethwa kukho ngokwezinto ezibonakalayo, uma uthenga amabhuzu ebusika ebantwaneni abafana, kungukungena kwamanzi okuyingxenye yangaphandle kanye nokubonakala kwangaphakathi. Uma izinwele zangaphakathi ziyizinto ezibonakalayo, iphunga elibi lizovela ngokuhamba kwesikhathi, imilenze izothuthuka, futhi ku-fungi enjalo imvelo ikhula kahle. Ngisho noma ingxenye engenhla iwubuhle noma izinto zokwakha zanamuhla - akusikho okumele ukhathazeke ngakho. Kodwa ngaphakathi kubaluleke kakhulu. Qinisekisa ukuthi uhlola izigxivizo nezigxivizo, kanye nekhwalithi yephezulu kuze kube yedwa. Kungcono uma amabhuthusi ebusika omfana engeke ahlanganiswe kuphela, kodwa futhi aqoshwe.
Indlela yokukhetha yedwa
Umkhuhlane owodwa, umfudumalo uzoba ngaphakathi. Kuyinto efiselekayo ukuthi akulula kakhulu, ngaphandle kwalokho ingane esebenzayo izoyisula ngokushesha. Isolezwe elithintekayo lizokwehlisa kancane kancane. Futhi into eyodwa - ukudweba kuso. Uma i-convex engaphezulu, kungcono ukunamathela emkhathini kanye nethuba elincane lokuwa.
Indlela yokukhetha izicathulo zomfana omncane
Ingane, kuze kube yiminyaka emibili noma emithathu, isebenzisa isikhathi esiningi esitokisini noma sled, futhi cishe ayihambi yedwa. Kukhona ukukhethwa kwamabhodlela nama-dummies, ngoba ngeke kube khona indawo yokucwilisa izinyawo, futhi okubaluleke kakhulu - ukushisa.
Kulolu khetho kubalulekile ukungalingani nobukhulu. Izikebhe kufanele zibe mahhala. Kungenzeka ngisho nangokwesayizi ngaphezulu. Lo mbhangqwana awusadingeki ukuba umlenze ubeke kahle futhi ungaqhubeki endaweni yesigcawu. Kuhle kakhulu ukukhetha ngokufaneleka. Umlenze wezingane kule minyaka uyingqayizivele, ukugcwala kwezicathulo kungase kungabi kufanelekile. Futhi likhula ngokushesha kakhulu.
Ngokuqondene nombala, lapha akuyona into ebaluleke kakhulu. Kodwa awunakwenzeka ukuthenga umfana wama-pink ugg boots. Kule minyaka yobudala, omama bakhathazeke kakhulu ngesitayela nokubukeka kwezingane. Imibala yama-boyish yimibala emnyama, ephuzi, eluhlaza okwesibhakabhaka, ebomvu nebomvu Uma kungenjalo, ukukhetha kungokwakho.
Izikhumba zasebusika zabafana abasha
Kulolu khetho, kunezinye izinhlamba. Amabhothi asebusika abafana abasha akufanele nje afudumele, akhululekile, kodwa kufanele athande umfana. Ingane endala isivele inezintandokazi zakhe zokuthandayo kanye nezintandokazi. Indima ebalulekile idlala ngombono wontanga. Ngakho-ke, kungcono ukuthatha esitolo naye, ake akhethe izicathulo zakhe zasebusika ezinganeni. Kwabafana, kubalulekile ukuba bahlonishwe yizingane zombili namantombazane. Futhi uyazi kangcono kunani ukuthi manje uyisimangalo kunazo zonke ubudala.
Ngaphezu kokubukeka, qiniseka ukuthi unake ubukhulu nezicathulo eziphelele. Uma umlenze udluliselwe umncane kakhulu, iminwe izobe iqhwa ngenxa yokusabalalisa okungalungile. Ukufaneleka kufanele kube ngobukhulu obukhulu, noma ngisho mahhala kancane. Ngisho nokucabangela ukuthi ngaphansi kwezicathulo zasebusika zibeka isikhwama esiningi kakhulu. Kungcono ukuthatha izinkinobho zamasokisi oboya, ukuze ungenzi iphutha ekubaleni.
Ukusheshisa okungapheli kwezinye izindawo kufanele kube okufanelekile, kufakwe kalula futhi kungagudluki. Ikhethelo elihle yi-Velcro. Kodwa kubalulekile ukuthi ukwethembeka kwabo akushiyi okuningi okudingekayo. I-Laces ebhokisini yasebusika imilenze ehleliwe kahle, kodwa ihlala isikhathi eside kakhulu futhi ivuliwe, uma kufanele ugxume kuzo futhi ubalekele. Kodwa umbani ezintweni ezinjalo ibhizinisi elingalindelekile. Ngokuwa njalo kweqhwa noketshezi, baqala ukuphuka, ukugqwala, ukubamba nokusabalalisa, okungamukeleki ezingcekeni zezingane.
Amabhuzu asebusika "Viking" abafana
Lolu hlobo lwezicathulo lubhekisela embundwini. Lona impahla entsha, cishe cishe engapheli futhi igqoke kakhulu. Amabhuzu "I-Viking" ayashisa futhi asomile. Kulabo abangekho ama-crumb, noma intsha ingabe ibanda. Njengoba ziqinile futhi zinamandla, azikwazi ukuhlala esitokisini isikhathi eside, kodwa ngokuhamba okusebenzayo - into edingekayo. Ukubuyekeza kwalezi zikhumba ezinhlanu ezinzima. Umfana - isibili izicathulo ezinhle. Kodwa-ke, uma esaphatha ukuzobenza zimanzi, amabhuzu azokoma isikhathi eside kakhulu. Okunye okushiwo okushiwo yiyo intengo yomkhiqizo. Ehle, ehlala isikhathi eside, efudumele, kodwa kunombhangqwana onjalo wama-ruble ayizinkulungwane eziyisikhombisa. Ngokuba amasokisi ngonyaka owodwa aphansi kakhulu. Kodwa uma umfana esekhulile, futhi umlenze awukhuli ngokushesha kakhulu - okuhlukile okuhle.
Indlela thunga ibhande ahambe ngokushesha futhi kalula
Izicathulo Adidas Wezingane for abafana namantombazane (isithombe)
Satellite ithelevishini iphakethe of NTV-PLUS
Amaphrotheni okunyakazisa isisindo ukulahleka - Izimo, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka